Farmaajo oo ka qeyb galay caleema saarka guddoonka golaha shacabka – Kalfadhi
Farmaajo oo ka qeyb galay caleema saarka guddoonka golaha shacabka
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo),ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo guddoomiyaha Aqalka Sare,Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta ka qeyb galay munaasabadii lagu caleema saaray afhayeenka golaha shacabka,Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan.
Duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan( Yariisow) ayaa sido kale ka qeyb galay caleema saarka.
Munaasbaada caleema saarka guddoomiyaha cusub waxa ay ka dhacday xarunta iskuulka tababarka ee janaraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaannada golaha shacabka uga mahadceliyay biseylka iyo hufnaanta ay ku doorten guddoomiyaha cusub ee Aqalka Hoose.
Afhayeenka golaha shacabka oo maanta la caleema saarayo
Golaha shacabka oo akhrinta koowaad gelinaya hindise sharciyeedka shirkadaha